Ruin: Maahan in lagu degdego wax ka bedelka dastuurka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ruin: Maahan in lagu degdego wax ka bedelka dastuurka
Doorashada dabadeed si deggan ha looga fiirsado
La daabacay tisdag 9 december 2014 kl 15.13
Bogga doodda ee war-geeyska maalinlaha ee DN oo ey saaka maqaal ku soo daabaceen hoggaamiyeyaasha afarta xisbiga ee garabka midig, Alliansen-ka ayey ku muujiyeen fikir la xiriira sidii ey heshiis uga wada gaari lahaayeen garabka casaan-cagaarka habka ugu wanaag-san ee dalka loo maamuli karo sidii looga bixi lahaa caqabadda siyaasdeed ee hareeysay maamulkii dalka.
Hoggaamiyeyaasha garabka midig ayaa soo jeediyey in heshiis guud laga wada gaaro sidii loo dooran lahaa cidda hoggaanka dalka qaban lahayd iyo sidoo kale sidii uu garabka aqlabaiyadda bata ee labada garab uu ku marsiin kari lahaa miisaaniyaddiisa xubnaha baarlamanka iyada oo sida la ogsoon yahay miisaan ku leeyahay xisbiga Sverigedemokraterna. Waana laba tallaabo oo ey xisbiyada garabka midig ku han-weyn yihiin sidii wada-hadal looga furi lahaa, isla-markaana looga gaari lahaa heshiis inta ka horreeysa doorashada horta leh ee dhowaantan uu ku dhawaaqaay madaxa dawladdu Stefan Löfven inay qabsoomi doonto 22-ka bisha maarso ee sannadka 2015.
Hase yeeshee uu tallaabadaa ka digay aqoon-yahan ku takhasusay culuunta dastuuriga, Olof Ruin iyo in lagu degdego is-bedel lagu sameeyo xeerka dastuuriga middaasina lagu adkeeyneyo awoodda hoggaan aan aqlabiyad ku lahayn xubnaha baarlamanka ee mustaqbalka:
- Iswiidhen waxaa caado soo jireen u ahayd in aragti guud laga wadaago kolka is-bedel lagu sameeyneyo dastuurka dalka u deg-san. Iima muuqato tallaabo amuurtaa loogu degdego, iyada oo weliba lagu jiro xaalad siaasadeed oo jahwareer-san.
Hoggaamiyeyaasha afarta xisbi ee garabka midig, (M, C, FP, iyo KD) ayaa maqaalka ey ku daabaceen war-geeyska DN ku sheegay in aaney suurtagal ahayn wada-shaqeeyn garabyada dhex-marta, hase yeeshee diyaar u ah in laga wada xaajoodo sidii meel la isula dhigi lahaa sidii hoggaammada aan aqlabiyadda ku laheyn baarlamanka ey miisaaniyaddooda u marsii-san lahaayeen. Waan mid ey u arkaan afarta xisbi ee garabka Alliansen-ku in tallaabadaa lagu gaari karo ama in wax laga badalo xeerka baarlamanka u deg-san, kaasina oo ah xeer u dhexeeya xeerarka dastuurka iyo kuwa caadiga ah.
Habka uu baarlamanka maanta u shaqeeyo ayaa ah kolka miisaaniyad la gudbineyo in marka hore cod loo qaado labada miisaaniyadood ee ugu laciif-san, oo kolkii uu mid halkaa ku haro oo midka ugu dambeeya ee miisaaniyadaha mucaaradka uu tartan la galo miisaaniyadda dawladda ee awoodda haysa. Iyadoona xeer hoosaadkii aan qorreyn ee lagu dhaqmi jirey ahaa in xisbiga miisaaniyaddiisu guul-dareeysato aanu codeeyn jirin kolka miisaaniyadaha kale loo codeeyneyo. Hase yeeshee uu xisbiga Sverigedemokaterna ka booday hab-dhaqankaasi. SD ayaa kolkii miisaaniyadoodii ka guul-dareeysatay miisaaniyaddii xisbiyada garabka midig u codeeyay isla-garabkii ka guuleeystay kolkii miiska la soo wada saarey miisaaniyaddii dawladda iyo tii garabka midig.
Dhabbo ka mid ah waddooyinka lagu adkeeyn karo hoggaannada aan aqlabiyadda ku laheyn baarlamanka ayaa ah in miisaaniyadaha oo dhan mar la soo wada saaro miiska si loogu codeeyo, dabadeed uu halkaa ku guuleeysto garabka ugu aqlabiyad bata.
Hase yeeshee loo baahan yahay si middaa lagu hir-geliyo in wax laga bedelo xeerka baarlamanka, waana midda uu ka carrab laalaadiyay in lagu degdego caalinka Olof Ruin. Isagoona sheegay in loo baahan yahay in si deggenaansho ah doorashada dabadeed looga wada xaajoodo. Hase yeeshee loo baahan yahay in laga tago fikirka ah garabeeysiga, sida uu sheegay Olof Ruin:
- Waxaan ula jeedaa in xaaladda siyaasaddu gaartay goob aanay horay uga socon karin oo ay hadaan ku dhaceeyso haddii kale.
Maxaad ula jeedaa haadaan lagu dhacayo?
- Waa arrin aan in muddo ahba ka hadli jiray, iyo in aanay suurtagal ahayn in lagu dheggenaado dhismaha garabyada, weliba baarlaman ka kooban siddeed xisbi. Waa dhibaato in xisbiyadu sidaa isugu kooleey-san yihiin. Waa in la helo dhaqdhaqaaq xisbiyada ah ee intaa ka ballaaran. Ama ugu dambeeyn ey labada xisbi ee ugu waaweyni (S iyo M) meel dhexe isugu yimaadaan, sida uu sheegay Olof Ruin, ahna caalin bartay culuunta siyaasadda dawliga, isla-markaana ku takhasusay nidaamka dastuurrada.
Isbahaysiga garabka midig oo wax ka beddelaya sharciga doorashada